Nagu saabsan - Kaiyuan Chicheng Waxyeelada Maaddada Co., Ltd.
Tianjin Yousheng Trading Co., Ltd. waxaa la aasaasay 2003. Waa shirkad ganacsi oo ku takhasustay ganacsiga gudaha iyo dibedda, is-maamul iyo wakiil soo dejinta iyo dhoofinta badeecadaha iyo tikniyoolajiyadda. Shirkaddu waxay ku taal Degmada Hedong, Tianjin. Maaddaama magaalo deked ah, Tianjin waxay leedahay faa'iido dabiici ah oo loogu talagalay ganacsiga soo dejinta iyo dhoofinta, gaadiidkuna waa ku habboon yahay.
Waxyaabaha ugu waaweyn ee ay shirkaddu hadda ka kooban tahay waxaa ka mid ah: waxyaabaha kiimikada ah ee loo yaqaan 'potassium fluoborate' (marka laga reebo badeecadaha halista ah iyo dawooyinka ka horreeya), alaabta ceyriinka ah (zirconium corundum, aaladaha dhoobada ah, cryolite), aaladaha la xoqin karo (giraangiraha wax lagu shiido ee kala duwan, Wareegyada bogga, jibbaarada, Emery disc) iyo dharka warshadaha (dhammaan polyester, dhammaan cudbi, suufka polyester) ee dharka Emery, iwm.
Waqtigan xaadirka ah, miisaanka ganacsiga ee shirkaddu maalinba maalinta ka dambaysa wuu sii ballaaranayaa, shirkadduna waxay ku kasbatay kalsoonida macaamiisha gudaha iyo shisheeyahaba tayada wax soo saarkooda iyo sumcad wanaagsan! Tani waxay ka dhigaysaa shirkadeena iyo alaabteenaba inay leeyihiin sumcad sare iyo saamiga suuqa ee gudaha iyo dibaddaba. Isla mar ahaantaana, waxaan marwalba ka horreysiinnaa danaha macaamiisheena, waxaana u heellan nahay inaan siino alaab iyo adeeg ka wanaagsan mid kasta oo ka mid ah macaamiisheenna.
Falsafadeena ganacsi: "Daacadnimo ku wajahan, macaamil marka hore"
Faa'iidada badeecadeena: "Sahay ku filan iyo qiimo macquul ah"
Waxaan aaminsanahay in wadashaqayn kastaa ay isu soo dhoweyn doonto!